Famafazana | Reef Resilience
Ny gamet ny coral dia azo ampiasaina mandritra ny ora maromaro aorian'ny fanalana alahelo. Noho izany dia zava-dehibe ny mitrandraka ny fampiroboroboana an-dranomasina raha vantany vao azo atao, izay ahitana ny gametes avy amin'ny ray aman-dreny samihafa. Ankoatra ny fandaharam-potoana, ny fifantohana ny gamet dia zava-dehibe iray hafa tokony hodinihina. Ny fitomboan'ny tsiranoka dia tsy maintsy avo lenta mba hahazoana antoka ny fihaonana atody / sperma, saingy tsy avo loatra ny spermia miteraka anoxia. Ny gametes dia tokony hampifandraisina amin'ny taham-pahavitrihana betsaka avy amin'ny ray aman-dreny maro araka izay azo atao (farafaharatsiny mpanjanaka 5). Rehefa tapitra ny ankamaroan'ny ampahany, dia azo ampiana seawater fanampiny ahafahana manitsy ny vahaolana spermatozo eo amin'ny endriky ny lemonade malemy (sperm izay hita fa tsy milky).
Famaranana atody tsy misy alikaola. Sary © Paul Selvaggio / SECORE International
Ny fitondrana fanangonam-bolo dia tokony halalinina mba hahatonga ny atody sasantsasany kely fotsiny. Matetika sy mihetsi-po matetika no ampiasaina mba hampiroborobo ny fampirimana. Taorian'ny fampiraisana, ny embryos aloha dia marefo sy mora tapaka (afaka mitombo hatrany ny embryos partial, saingy miteraka "lavaka", lava-bato kely sy mpiavy). Amin'izao dingana izao, ny fanadiovana ny rano dia manan-danja, saingy tokony horaisina ny fikarakarana tsy hanimba ireo embryon marefo.
Famafazana gametes ho an'ny haran-dranomasina ao amin'ny laboratoara. Atao amin'ny ranomasimbe vao haingana ny atody mandra-panovan'ny rano ny lokony avy amin'ny milky mba hazava. Sary © Paul Selvaggio / SECORE International
Tokony asiana fanasambe ny fanjaitra avy amin'ny atody voadio rehefa afaka adiny roa. Ny tavy fisaka manasaraka, izay mandatsaka avy any ambany, dia fitaovana tena tsara, satria avelany handrodana ny vovo-tsiranoka avy eo ambany elatry ny atody / embryos. Ny ranomasin-driaka vaovao dia azo alefa tsikelikely ao anaty fitoeran-drano avy eo amin'ny sisin'ny lavaka mba hanaovana lavaka telo na efatra, mandra-pahitan'ny rano tanteraka. Azo ampiasaina koa ny tavoahangy siphon mba hanosotra ny vovo-tsiranoka avy ao ambany etona, ary ny rano fantsona vaovao dia ampidirina ao anaty rindrin'ny fitoeran-drano.
Any amin'ny faritra izay tsy dia fahita firy na zara raha misy fizarana ny kolon-drenin'ny razana, ny fanangonana sy ny fifantohana amin'ny gametes raha vao ny fahavokarana dia mety hanome vola be ho an'ny famatsian-drano. Na dia tsy azo atao aza ny ezaka fampivelarana ny fanaovana firaisana ara-nofo (anisan'izany ny kolontsaina, ny fifehezana, ary ny fambolena), dia azo alefa ny atody mipetaka mba hiparitaka sy hialana amin'ny natiora.
Na dia narahina aza ny fomba tokony hatao, dia mety mbola hisy ihany ny zezika ratsy. Ny tahan'ny zezika ambany dia hiafara amin'ny andiany mila fitandremana hatrany, satria ny atody tsy misy fotony (izay tsy azo avahana amin'ny atody misy zezika) dia hanapotika sy hampihena ny kalitaon'ny rano. Mila fanovana rano matetika kokoa ireo andiany ireo. Ny gametes izay zezika malemy dia mety vokarin'ny zanatanin'ny ray aman-dreny izay tsindrian'ny hafanana na ny loto.
Ny fampangatsiahana dia hita manodidina ny adiny efatra aorian'ny fampangatsiahana amin'ny fampiasana mikrosopaka miserana. Hamboly embryos voajanahary voajanahary amin'izay manavotra larvae.
Manomboa gamety avy amin'ny kolonely 5 farafaharatsiny (tsy klonona).
Asio gamety ao anatin'ny 2 ora fanalana (tsy misy tsara indrindra).
Ny fifantohana amin'ny tsirilahy dia rehefa ny lokon'ny rano dia lemonade loko.
Aoka ianao halemy fanahy mandritra ny vanim-potoana fanangonana raha mbola marefo ny embryon aloha.
Ny fampangatsiahana dia mety ho voan'ny aretina ao amin'ny vahoaka.
Fikarohana momba ny Coral Spawning sy ny tranokala fampielezan-kevitra Larval
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSECORE - Rehefa mifampihaona ny sifotra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSECORE - Kreisel System